Ny mpilalao ny miniseries Last Days of Ptlomey Gray dia vita amin'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Andro farany an'ny miniseriana Ptlomey Gray ho an'ny Apple TV + vita
Tamin'ny Desambra lasa teo, niresaka momba ny iray amin'ireo andiany manaraka izay ho tonga amin'ny serivisy fandefasana horonantsary an'i Apple izahay. Miresaka momba ny andiany izahay Andro farany an'ny Ptlomey Gray, andiany iray i Samuel L. Jackson no tena mpiaro azy amin'izay ho fandraisany anjara faharoa amin'ny tetikasa ho an'ny Apple TV + aorian'ny The Banker.
Rehefa afaka volana maromaro nefa tsy nanana vaovao momba ity tetikasa ity isika, androany dia mifoha amin'ny vaovao mikasika ny mpilalao amin'ity andiany ity, andiany iray izay nanampy fanampiny 5, ka mamita ny mpilalao fototra ao amin'ireo andian-dahatsoratra manan-danja indrindra amin'ity andiany ity, andiany iray izay mandray ilay tantara an-tsarimihetsika nosoratan'i Walter Moseley.
Araka ny filazan'i Variety, mpanafika ny miniseries Andro farany an'ny Ptlomey Gray nitarina tamin'ny:
Walton Goggins (nohamarinina)
Marsha Stephanie Blake (Izaho no vadinao)
Walton Goggins sy Omar Miller dia miara-miasa amin'ny hatsikana CBS Ilay Unicorn. Ity miniseries ity dia ny fihaonan'i Walton Goggins sy i Samuel L. Jackson taorian'izay ho anisan'ny mpilalao sarimihetsika Ilay valo feno fankahalana (The Hateful Eight) tarihin'i Quentin Tarantino.
Samuel L. Jackson milalao an'i Ptolemy Gray, lehilahy 91 taona mararin'ny dementia. Manana fotoana i Grey hamerina vetivety ny fitadidiany ary mampiasa io fotoana sarobidy io hamahana ny fahafatesan'ny zana-drahalahiny sy hiverenany amin'ny lasa sy ny fianakaviany.
Araka ny nolazain'i Variety, Walton goggins hilalao ny Dr. Rubin, raha Marsha stephanie blake hilalao an'i Niecie, renin'ny zanak'anabavin'i Grey. Damon Gupton hilalao ny mpanabe an'i Grey, Coydog, ary Cynthia Kaye McWilliams ho an'i Sensia, vadin'i Grey faharoa. Omar miller Hilalao an'i Reggie Llyod, zafiafin'i Grey izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Andro farany an'ny miniseriana Ptlomey Gray ho an'ny Apple TV + vita
Alefako amin'ny fomba ofisialy ny AirTags, macOS Big Sur 11.3, ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Windows 10 dia hanolotra kalitaon'ny feo nohatsaraina ho an'ny AirPods, iTunes ary Apple Music